Ungazicima njani zonke iiplagi zesikhangeli seSafari | Ndisuka mac
Ungazikhubaza njani zonke iiplagi zesikhangeli seSafari
I-Safari, njengabakhangeli abaninzi, inokusebenzisa ii-plug-ins ezahlukeneyo, uninzi lwazo olusinika iinkonzo ezongezelelweyo ezingafakwanga ngokwendalo. Enye yezona zinto zaziwayo nezingalunganga yiFlash, iplagi-apho uninzi lwezikhangeli alusayixhasi ngokwendalo, Inkxaso esinokuthi siyisebenzise ukuba sifuna ukuyivula ukuba undwendwele iwebhusayithi eyilelwe yile teknoloji yeAdobe.
I-Safari isivumela ukuba sisebenze ngokukodwa okanye singasebenzi sodwa okanye ngokudibeneyo, ukuze kungabikho plug-in, enje ngeJava, iFlash ..., ezenziwayo xa sikhangela iincwadi. Nangona kunjalo, Inguqulelo yamva nje yeChannel, isuse ukufikelela kwii-plug-ins, Okwangoku asikwazi ukufikelela kuzo ukuze sizisebenzise okanye sizenze zingasebenzi, indawo engalunganga kakhulu yeChannel enokubiza, ubuncinci phakathi kwabasebenzisi abanesidingo.
Ngaphambi kokuyekisa ukusebenza ii-plug-ins kufuneka zithathelwe ingqalelo ukuba azinanto yakwenza nolwandiso, ke ukuba siyazicima, izandiso esizifakileyo eSafari ziya kuqhubeka nokusebenza ngaphandle kwengxaki. Izandiso ngokubanzi ziguqula ukusebenza kwesikhangeli ngelixa ii-plug-ins zijolise ikakhulu ekunikezeleni ngenkxaso yemultimedia.
Khubaza ii-plug-ins ze-Safari kwi-Mac
Khubaza zonke iimodyuli eziqhutywa eSafari kunye yinkqubo elula kakhulu izakuthatha imizuzwana embalwa. Apha sikubonisa indlela yokwenza zingasebenzi.
Kuqala sivula isiphequluli seSafari kwaye siye kukhetho olukwimenyu yeSafari.
Emva koko siye kwithebhu Khu seleko.
Ngoku kufuneka siyiqwalasele ibhokisi Iimodyuli ze-Intanethi, ukuze zonke iiplagi-ins ziyeke ukusebenza kwi-Safari.
Okulandelayo kufuneka siqale kwakhona isikhangeli, kodwa ukufumana iziphumo ezingcono kunye nokuqinisekisa ukuba zonke ii-plug-ins ziyekile ukusebenza, eyona nto qala kabusha iMac yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » Ungazikhubaza njani zonke iiplagi zesikhangeli seSafari
Izinto ezi-3 ngoku ziyafumaneka kwi-Mac, iOS kunye ne-Apple Watch
ICarPlay njengomgangatho kwizixhobo ezitsha zoovulindlela